देवकोटाले हरि श्रेष्ठसँग बिष किन मागे ? – bampijhyala.com
Home > ब्यक्तित्व सस्मरण > देवकोटाले हरि श्रेष्ठसँग बिष किन मागे ?
२९ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:०२ bampijhyala
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका प्रिय साथी हरि श्रेष्ठले देवकोटाका विषयमा तीन वटा मूल्यमान कृति लेखे । तर देवकोटाबारे लेख्न उनलाई अझै धीत मरेको थिएन । त्यसैले उनले पनि अरुहरुले झैँ नरेन्द्रराज प्रसाईलाई देवकोटाका विषयमा लेख्न धेरैभन्दा धेरे सामग्री जुटाई दिएका थिए । अनि देवकोटाका छायाका रुपमा प्रसिद्धि कमाएका पण्डित श्यामदास वैष्णव, देवकोटाका सहायक कञ्चन पुडासैनी र हरि श्रेष्ठले ‘देवकोटाको जीवनशैली’ उकास्न धेरै मद्धत गरेका थिए । अनि अन्तिममा हरि श्रेष्ठले त्यसैबारे एउटा टिप्पणी लेखेका थिए । श्रेष्ठको जीवनकालकै अन्तिम औपचारिक हस्ताक्षर पनि यही नै थियो ।
रोनाल्डोले बनाए अर्को रेकर्ड २९ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:०२
विवाहको भीडले गाउँभर कोरोना संक्रमण थपिए २९ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:०२
इजरायली सेनाको आक्रमणबाट गाजा पट्टीमा १३ बालबालिकासहित ४५ जनाको मृत्यु, ३ हजार बढी घाइते २९ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:०२
Psychological Impact of Covid 19 with Sandeep Maheshwari २९ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:०२
उपत्यकामा आजदेखि अत्यावश्यक बाहेक सबै कार्यालय बन्द २९ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:०२